डेंगुका लक्षण र बच्ने उपाय -
२०७६, २८ भाद्र शनिबार ०९:३१ September 14, 2019 clickonLeaveaComment on डेंगुका लक्षण र बच्ने उपाय
डेंगु ज्वरो एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो। डेंगुको भाइरसबाट संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइले यो रोग सार्दछ। अहिले देशका विभिन्न जिल्लामा यो रोग देखापरिरहेको छ। यो रोगका कारण यो वर्ष मात्र हालसम्म ६ हजारभन्दा बढी बिरामी भैसकेको तथ्यांक अैरहेको छ। यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो मात्र टोक्ने गर्दछ। वर्षात्को समयमा सुरु भएपछि डेंगु ज्वरोको प्रकोप बढ्न थाल्छ।
डेंगु ज्वरोका लक्षण
– शरीरमा डाबरहरु आउने
– अरुचि हुने
– पेट तथा आन्द्रामा गडबडी हुने केही बिरामीमा सुरुमै शरीरभरि खटिरा आउन्छ।
त्यस्तै शरीरमा डण्डिफोर जस्तो डावरहरु देखिन्छन् । ज्वरो अैरहेको अवस्थामा नाक तथा गिजाबाट रक्तश्राव हुने र छालामुनि रक्तस्राव हुने हुन्छ।
– यो रोगबाट बच्नका लागि मुख्यतया लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु पर्दछ। यसका लागि लामखुट्टेको नियन्त्रण नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
– पुरा शरीर ढाकिने गरी कपडा लगाउने
– लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न मल्हमजस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने
– राती र दिउँसो पनि झुलभित्र सुत्ने
– घर वरपर वा खेतबारीमा काम गर्न जाँदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न ध्यान पुर्‍याउने
– झ्याल तथा ढोकामा जाली लगाई बन्द राख्ने
लामखुट्टेले फुल पार्ने ठाँउमा फुल पार्न नदिन गर्नुपर्ने उपाय
– पानी राख्ने भाँडाहरु जस्तै पानी ट्याङ्की, ग्रागी, दहीको कतारो, बाल्टिन, ड्रम आदि सधैँ छोपेर राख्ने
– लामखुट्टेको नियन्त्रणका लागि घर वरपर पानी जम्न नदिने, खाल्डा खुल्डी पुर्ने र घर आँगन सफा राख्ने
– घर वरपर सवारी साधनका टायर, गमला लगायतका कुरामा मा पानी जम्न नदिने र सफा गर्ने
स्वास्थखबर पत्रिका बाट
नेकपा अभियान सञ्चालन गर्दै
सरकार जनताको काम गर्न कटिबद्ध छ
महिला हरुले आफ्ना नङ हरु लाई कसरी सुन्दर र आकर्षक बनाउने, सजिलो तरिका पढनुस
२०७५, १४ माघ सोमबार ०१:२९ January 28, 2019 clickon
दाँत दुखाइ कम गर्ने केही घरेलु उपायहरु
२०७५, २७ असार बुधबार १३:३४ July 11, 2018 clickon
कोभिड-१९ निको हुन कति समय लाग्छ ? के यो दोहोरिन्छ ?
२०७७, १८ बैशाख बिहीबार १०:१२ April 30, 2020 clickon